၂၀၃၀ ပွညျ့နှဈမှာ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာတှကေ လူသားတှရေဲ့နထေိုငျဆကျသှယျမှုကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျကွောငျး Dell Technologies ရဲ့ သုတသေနစဈတမျးက ဖျောပွ - MyMedia
၂၀၃၀ ပွညျ့နှဈမှာ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာတှကေ လူသားတှရေဲ့နထေိုငျဆကျသှယျမှုကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျကွောငျး Dell Technologies ရဲ့ သုတသေနစဈတမျးက ဖျောပွ
Dell Technologies ဟာ Future of connected living (အနာဂတျရဲ့ လူနမှေုဆကျသှယျရေး) ကို လလေ့ာမှုပွုလုပျခဲ့ပွီး တှရှေိ့ခကျြအခြို့ကို ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၆ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျကွညောခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ၂၀၃၀ ပွညျ့နှဈမှာ နညျးပညာတှကေ လူသားတှရေဲ့နထေိုငျဆကျသှယျမှုကို ဘယျလိုပွောငျးလဲနိုငျမလဲဆိုတာ ရှာဖှဖေျောထုတျတဲ့ သုတသေနအသဈ တဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီသုတသေနကို Institute for Future (IFTF) နဲ့ Vanson Bourne တို့က ပူးပေါငျးပွီး စငျကာပူအပါအဝငျ၊ အာရှပစိတျဖိတျနဲ့ ဂပြနျ (APJ) ၁၀ နိုငျငံက စီးပှားရေးဦးဆောငျသူ ၁၁၀၀ ကို စဈတမျးကောကျယူမှု လုပျဆောငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အနာဂတျမှာ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာတှဟော ကမ်ဘာတဈဝနျးရှိ လူသားအားလုံးရဲ့ တိုးတကျမှုကို ဖွဈပျေါအောငျ တှနျးအားပေးနိုငျမယျ့ အခှငျ့အလမျးတှေ ပွညျ့နကွေောငျး စဈတမျးကတဈဆငျ့ တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ။
Dell ကဦးဆောငျပွုလုပျခဲ့တဲ့ သုတသေနမှာ စိတျဝငျစားဖှယျ၊ စိတျလှုပျရှားအံ့သွဖှယျ အခကျြအလကျတှကေို တှရှေိ့ခဲ့ရပွီး ဒီထဲကမှ အဓိကအခကျြ ငါးခကျြကို MyTeach Myanmar ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ။
1. Networked Reality:
လာမယျ့ဆယျစုနှဈအတှငျးမှာ Cyberspace ဟာ လကျရှိဒဈဂဈြတယျပတျဝနျးကငျြဖွဈတဲ့ ရုပျမွငျသံကွားစကျတှေ၊ စမတျဖုနျးတှနေဲ့ အခွားဒီဂဈြတယျဆိုငျရာတှကေို ကြျောလှနျပွီး လှမျးခွုံသှားပါလိမျ့မယျ။ (ပွောရမယျဆိုရငျ Virtual နဲ့ real ကွားမှာရှိတဲ့ ကနျ့သတျမဉျြး ပကျြသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒီအသှငျပွောငျးလဲမှုကို 5G ကှနျရကျလိုမြိုး မွနျနှုနျးမွငျ့နညျးပညာက မောငျးနှငျသှားဖှယျရှိပါတယျ။)
2. Connected Mobility and Networked Matter:
အနာဂတျယာဉျတှဟော မိုလျဘိုငျးကှနျပြူတာတှကေို မလှဲမသှလေိုအပျလာမယျ။ Virtual space မှာ အပွနျအလှနျအကြိုးပွုနကွေတဲ့အတှကျ လူတှကေလညျး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ကမ်ဘာကွီးထဲမှာ သှားဖို့လိုအပျတဲ့နရောဆီ ချေါသှားဖို့ ဒီသယျယူပို့ဆောငျရေးစနဈကို ယုံယုံကွညျကွညျသုံးလာကွလိမျ့မယျ။
3. From Digital Cities to Sentient Cities:
မွို့ကွီးတှဟော ကိုယျပိုငျကှနျရကျဆိုငျရာ အခွခေံအဆောကျအဦတှေ၊ Smart Object တှေ၊ Self-reporting စနဈတှနေဲ့ AI-powered analytics တှကေို အသုံးပွုနထေိုငျလာကွလိမျ့မယျ။
4. Agents and Algorithms:
အနာဂတျမှာ လူတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးဟာ မွငျ့မားတဲ့ကိုယျပိုငျလူနမှေုဘဝအတှကျ “operating system for living” ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုရှိလာတာ မွငျတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ဒီစနဈဟာ လူတှရေဲ့လိုအပျခကျြတှကေို ကွိုတငျခနျ့မှနျးနိုငျပွီး၊ တဈနတေ့ာလုပျငနျးဆောငျတာတှကေနေ အခြိနျပိုတှထှေကျလာအောငျ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။
5. The robot with Social Lives:
လူသားတှရေဲ့ စှမျးရညျနဲ့ လုပျနိုငျစှမျးတှကေို တိုးခြဲ့လာရာမှာ စကျရုပျတှကေ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ စကျရုပျတှကေလညျး သူတို့ရှာဖှတှေရှေိ့တဲ့ အကွောငျးအရာသဈတှကေို “Social robot network” မှာ မြှဝကွေပွီး၊ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ဆနျးသဈတီထှငျမှုနဲ့ တိုးတကျမှုကို အရှိနျမွှငျ့လာကွပါလိမျ့မယျ။
ဒီရှာဖှတှေရှေိ့ခကျြနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး Dell Technologies ရဲ့ အာရှပစိဖိတျနဲ့ ဂပြနျ၊ Global digital Cities ရဲ့ ဥက်ကဌလညျးဖွဈ၊ Contributing expert လညျးဖွဈတဲ့ Amit Midha က “၂၀၃၀ ပွညျ့နှဈမှာ ခြိတျဆကျမှုတှေ၊ နညျးပညာဆိုငျရာဆကျနှယျမှုတှကေ လုံးဝကှဲပွားခွားနားလာပါလိမျ့မယျ၊ လူသားတှနေဲ့ စကျပစ်စညျးတှကွေားမှာ အအောငျမွငျဆုံးဆကျနှယျနှုလညျး ဖွဈလာမယျလို့ ယုံကွညျထားပါတယျ။ လူအသီးသီးဟာ သူတို့နဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အားသာခကျြဖွဈအောငျ အသုံးပွုလာမယျ့ သင်ျကတေ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ” လို့ မှတျခကျြပေးပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“အာရှပစိဖိတျနဲ့ ဂပြနျနိုငျငံတဈဝနျး စဈတမျးကောကျယူခဲ့ရာမှာ စီးပှားရေးဦးဆောငျသူ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးက စကျတှေ၊ စကျရုပျတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး လူသားတှရေဲ့ ကနျ့သတျခကျြထကျကြျောလှနျလုပျဆောငျနိုငျတာကို ကွိုဆိုကွောငျး တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ။ လူနမှေုပုံစံအသဈတှကေို ဖနျတီးဖို့၊ ကုနျထုတျစှမျးအားတိုးစဖေို့၊ အလုပျနဲ့နထေိုငျမှုဘဝ ပိုပွီးဟနျခကျြညီစဖေို့၊ မွို့ကွီးတှရေရှေညျတညျတံ့ခိုငျမွဲဖို့ နညျးပညာတှကေို ထိနျးခြုပျအသုံးခနြိုငျပါတယျ” လို့လညျး Amit Midha က ထပျလောငျးပွောကွားသှားခဲ့ပါသေးတယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အဓိကမွို့တျော ရနျကုနျမှာ နညျးပညာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာမှုနဲ့ပတျသကျပွီး “တိုးတကျလာတဲ့နညျးပညာတှဟော ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဘဝတှကေို မကွုံစဖူးနညျးလမျးတှနေဲ့ ပွောငျးလဲပေးနပေါတယျ။ ပွီးတော့ ဒီခေါငျးစဉျကလညျး အာရှပစိဖိတျနဲ့ဂပြနျ အပွငျ မွနျမာနိုငျငံနဲ့လညျး သကျဆိုငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံဟာ မွနျမွနျဆနျဆနျပဲ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျနတောပါ။ ဒါဟာ Dell Technologies အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဖောကျသညျတှနေဲ့ စီးပှားရေးကုမ်ပဏီတှဟော အနာဂတျမှာ လူသားနဲ့စကျကိရိယာတှေ ဘယျလိုပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွမလဲဆိုတာကို သိရှိနားလညျလာအောငျလညျး ဆကျပွီးလလေ့ာသှားမှာပါ” လို့ Asia Emerging Markets (AEM), Dell Technologies ရဲ့ ဒုတိယဥက်ကဌ Anothai Wettayakorn က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၂၀၃၀ မှာဖွဈလာမယျ့ အနာဂတျရဲ့လူမှုဆကျသှယျရေး အတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုတှအေနနေဲ့ သိထားသငျ့တဲ့အခကျြနှဈခကျြက အပွောငျးအလဲကို ကွိုတငျမြှျောမှနျးထားခွငျးနဲ့ စိနျချေါမှုတှဆေီ သှားရောကျခွငျး ပဲဖွဈပါတယျ။
APJ မှာရှိတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးအတျောမြားမြားကတော့ ဒီအပွောငျးအလဲအတှကျ ပွငျဆငျထားနှငျ့ပွီးသား ဖွဈပါတယျ။
− ၈၀ ရာခိုငျနှုနျး (စငျကာပူမှာ ၇၇ ရာခိုငျနှုနျး) ကတော့ အလိုအလြောကျ လုပျဆောငျတဲ့နညျးလမျးနဲ့ (လူအစား၊ စကျကိုအစားထိုးသုံးပွီး) အခြိနျကုနျတာတှကေို ပွငျဆငျနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ကွတယျ။
−၄၉ ရာခိုငျနှုနျးသော စီးပှားရေးဦးဆောငျသူတှေ (စငျကာပူမှာ ၅၃ ရာခိုငျနှုနျး) ကတော့ Self-aware ဖွဈဖို့ စကျတှကေို ကွိုဆိုကွတယျ။
− APJ နဲ့ စငျကာပူနိုငျငံက လုပျငနျးရှငျ တဈဝကျကြျောဟာ Networked Reality ဟာ အသဈအဆနျးမဟုတျတဲ့ သာမနျကိစ်စဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ထားကွပါတယျ။
− ၆၃ ရာခိုငျနှုနျး (စငျကာပူမှာ၇၀ ရာခိုငျနှုနျး) ကတော့ Virtual နဲ့ Reality ကွား နစေ့ဉျရှငျသနျရတာကို ကွိုဆိုကွပါလိမျ့မယျ။
− ၆၂ ရာခိုငျနှုနျး (စငျကာပူမှာ ၅၇ ရာခိုငျနှုနျး) ကတော့ Brain-computer interface တှနေဲ့အဆငျပွပွေနေနေိုငျဖို့ (ကှနျပြူတာအကူအညီနဲ့ သူတို့ရဲ့စိတျကို ထိနျးခြုပျတာ) ကို ကွိုဆိုကွပါတယျ။
− စဈတမျးကောကျယူမှုရဲ့ ၇၈ ရာခိုငျနှုနျး (စငျကာပူမှာ ၈၅ ရာခိုငျနှုနျး) ကတော့ ၂၀၃၀ မှာ Privacy ကို ဒီနခေ့တျေထကျပိုပွီး စိုးရိမျရမယျလို့ မြှျောလငျ့ထားကွပါတယျ။
− စဈတမျးကောကျထားတဲ့ထဲက စီးပှားရေးဦးဆောငျသူ ၇၄ ရာခိုငျနှုနျး (စငျကာပူမှာ ၈၆ ရာခိုငျနှုနျး) ကတော့ Privacy ကို ထိပျတနျးလူမှုရေ:ဆိုငျရာပွဿနာတဈရပျအဖွဈ ဖွရှေငျးဖို့လိုအပျကွောငျး သဘောထားကွပါတယျ။
− ၄၉ ရာခိုငျနှုနျး (စငျကာပူမှာ ၅၃ ရာခိုငျနှုနျး) ကတော့ Self-aware ဖွဈဖို့ စကျတှကေို ကွိုဆိုကွပါတယျ။
AI အသုံးပွုခွငျး ဆိုငျရာ အခွားပွဿနာတှနေဲ့ စိနျချေါမှုတှအေဖွဈ ၄၉ ရာခိုငျနှုနျး (စငျကာပူမှာ ၅၄ ရာခိုငျနှုနျး) က AI အသုံးပွုခွငျးဆိုငျရာ စညျးမဉျြးဥပဒကေို ပွတျပွတျသားသားပွဌာနျးဖို့ တောငျးဆိုကွပါတယျ။
ဒဈဂဈြတယျအလဉျြပွတျတောကျခွငျးပွဿနာရဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ၈၄ ရာခိုငျနှုနျး (စငျကာပူမှာ ၈၄ ရာခိုငျနှုနျး) က သူတို့ရဲ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုလုံးမှာ ဒဈဂဈြတယျအသှငျကူးပွောငျးမှုကို ပိုမိုကယျြပွနျ့စှာပွုလုပျသငျ့ကွောငျး ဝနျခံကွပါတယျ။
Ref: Dell Technologies
၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေက လူသားတွေရဲ့နေထိုင်ဆက်သွယ်မှုကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ကြောင်း Dell Technologies ရဲ့ သုတေသနစစ်တမ်းက ဖော်ပြ
Dell Technologies ဟာ Future of connected living (အနာဂတ်ရဲ့ လူနေမှုဆက်သွယ်ရေး) ကို လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်အချို့ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ နည်းပညာတွေက လူသားတွေရဲ့နေထိုင်ဆက်သွယ်မှုကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုတာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့ သုတေသနအသစ် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသုတေသနကို Institute for Future (IFTF) နဲ့ Vanson Bourne တို့က ပူးပေါင်းပြီး စင်ကာပူအပါအဝင်၊ အာရှပစိတ်ဖိတ်နဲ့ ဂျပန် (APJ) ၁၀ နိုင်ငံက စီးပွားရေးဦးဆောင်သူ ၁၁၀၀ ကို စစ်တမ်းကောက်ယူမှု လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လူသားအားလုံးရဲ့ တိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်အောင် တွန်းအားပေးနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေ ပြည့်နေကြောင်း စစ်တမ်းကတစ်ဆင့် တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
Dell ကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားအံ့သြဖွယ် အချက်အလက်တွေကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ဒီထဲကမှ အဓိကအချက် ငါးချက်ကို MyTeach Myanmar ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ Cyberspace ဟာ လက်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွေ၊ စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ အခြားဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာတွေကို ကျော်လွန်ပြီး လွှမ်းခြုံသွားပါလိမ့်မယ်။ (ပြောရမယ်ဆိုရင် Virtual နဲ့ real ကြားမှာရှိတဲ့ ကန့်သတ်မျဉ်း ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအသွင်ပြောင်းလဲမှုကို 5G ကွန်ရက်လိုမျိုး မြန်နှုန်းမြင့်နည်းပညာက မောင်းနှင်သွားဖွယ်ရှိပါတယ်။)
အနာဂတ်ယာဉ်တွေဟာ မိုလ်ဘိုင်းကွန်ပျူတာတွေကို မလွဲမသွေလိုအပ်လာမယ်။ Virtual space မှာ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနေကြတဲ့အတွက် လူတွေကလည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ သွားဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာဆီ ခေါ်သွားဖို့ ဒီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးလာကြလိမ့်မယ်။
မြို့ကြီးတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦတွေ၊ Smart Object တွေ၊ Self-reporting စနစ်တွေနဲ့ AI-powered analytics တွေကို အသုံးပြုနေထိုင်လာကြလိမ့်မယ်။
အနာဂတ်မှာ လူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာ မြင့်မားတဲ့ကိုယ်ပိုင်လူနေမှုဘဝအတွက် “operating system for living” ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုရှိလာတာ မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီစနစ်ဟာ လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး၊ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကနေ အချိန်ပိုတွေထွက်လာအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
လူသားတွေရဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို တိုးချဲ့လာရာမှာ စက်ရုပ်တွေက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ စက်ရုပ်တွေကလည်း သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာသစ်တွေကို “Social robot network” မှာ မျှဝေကြပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့ တိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်လာကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Dell Technologies ရဲ့ အာရှပစိဖိတ်နဲ့ ဂျပန်၊ Global digital Cities ရဲ့ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်၊ Contributing expert လည်းဖြစ်တဲ့ Amit Midha က “၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မှာ ချိတ်ဆက်မှုတွေ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုတွေက လုံးဝကွဲပြားခြားနားလာပါလိမ့်မယ်၊ လူသားတွေနဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကြားမှာ အအောင်မြင်ဆုံးဆက်နွယ်နှုလည်း ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ လူအသီးသီးဟာ သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အားသာချက်ဖြစ်အောင် အသုံးပြုလာမယ့် သင်္ကေတ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်” လို့ မှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“အာရှပစိဖိတ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာမှာ စီးပွားရေးဦးဆောင်သူ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းက စက်တွေ၊ စက်ရုပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လူသားတွေရဲ့ ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်နိုင်တာကို ကြိုဆိုကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ လူနေမှုပုံစံအသစ်တွေကို ဖန်တီးဖို့၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးစေဖို့၊ အလုပ်နဲ့နေထိုင်မှုဘဝ ပိုပြီးဟန်ချက်ညီစေဖို့၊ မြို့ကြီးတွေရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ နည်းပညာတွေကို ထိန်းချုပ်အသုံးချနိုင်ပါတယ်” လို့လည်း Amit Midha က ထပ်လောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကမြို့တော် ရန်ကုန်မှာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး “တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို မကြုံစဖူးနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြောင်းလဲပေးနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီခေါင်းစဉ်ကလည်း အာရှပစိဖိတ်နဲ့ဂျပန် အပြင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာပါ။ ဒါဟာ Dell Technologies အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေဟာ အနာဂတ်မှာ လူသားနဲ့စက်ကိရိယာတွေ ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကို သိရှိနားလည်လာအောင်လည်း ဆက်ပြီးလေ့လာသွားမှာပါ” လို့ Asia Emerging Markets (AEM), Dell Technologies ရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ Anothai Wettayakorn က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၃၀ မှာဖြစ်လာမယ့် အနာဂတ်ရဲ့လူမှုဆက်သွယ်ရေး အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့အချက်နှစ်ချက်က အပြောင်းအလဲကို ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားခြင်းနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေဆီ သွားရောက်ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။
APJ မှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများကတော့ ဒီအပြောင်းအလဲအတွက် ပြင်ဆင်ထားနှင့်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
− ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း (စင်ကာပူမှာ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း) ကတော့ အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ (လူအစား၊ စက်ကိုအစားထိုးသုံးပြီး) အချိန်ကုန်တာတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြတယ်။
−၄၉ ရာခိုင်နှုန်းသော စီးပွားရေးဦးဆောင်သူတွေ (စင်ကာပူမှာ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်း) ကတော့ Self-aware ဖြစ်ဖို့ စက်တွေကို ကြိုဆိုကြတယ်။
− APJ နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံက လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဝက်ကျော်ဟာ Networked Reality ဟာ အသစ်အဆန်းမဟုတ်တဲ့ သာမန်ကိစ္စဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
− ၆၃ ရာခိုင်နှုန်း (စင်ကာပူမှာ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း) ကတော့ Virtual နဲ့ Reality ကြား နေ့စဉ်ရှင်သန်ရတာကို ကြိုဆိုကြပါလိမ့်မယ်။
− ၆၂ ရာခိုင်နှုန်း (စင်ကာပူမှာ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း) ကတော့ Brain-computer interface တွေနဲ့အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ဖို့ (ကွန်ပျူတာအကူအညီနဲ့ သူတို့ရဲ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ်တာ) ကို ကြိုဆိုကြပါတယ်။
− စစ်တမ်းကောက်ယူမှုရဲ့ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်း (စင်ကာပူမှာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း) ကတော့ ၂၀၃၀ မှာ Privacy ကို ဒီနေ့ခေတ်ထက်ပိုပြီး စိုးရိမ်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
− စစ်တမ်းကောက်ထားတဲ့ထဲက စီးပွားရေးဦးဆောင်သူ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်း (စင်ကာပူမှာ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်း) ကတော့ Privacy ကို ထိပ်တန်းလူမှုရေ:ဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ရပ်အဖြစ် ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်း သဘောထားကြပါတယ်။
− ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း (စင်ကာပူမှာ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်း) ကတော့ Self-aware ဖြစ်ဖို့ စက်တွေကို ကြိုဆိုကြပါတယ်။
AI အသုံးပြုခြင်း ဆိုင်ရာ အခြားပြဿနာတွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေအဖြစ် ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း (စင်ကာပူမှာ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်း) က AI အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေကို ပြတ်ပြတ်သားသားပြဌာန်းဖို့ တောင်းဆိုကြပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အလျဉ်ပြတ်တောက်ခြင်းပြဿနာရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၈၄ ရာခိုင်နှုန်း (စင်ကာပူမှာ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်း) က သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ဝန်ခံကြပါတယ်။
The post ၂၀၃၀ ပွညျ့နှဈမှာ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာတှကေ လူသားတှရေဲ့နထေိုငျဆကျသှယျမှုကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျကွောငျး Dell Technologies ရဲ့ သုတသေနစဈတမျးက ဖျောပွ appeared first on MyTech Myanmar.
MyMedia2020-01-25T12:34:16+06:30January 25th, 2020|MYTECH MYANMAR|